Boky torolàlana Android, torolàlana fototra ho an'ireo vao manomboka ary dingana voalohany | Androidsis
Boky torolàlana Android, torolàlana fototra ho an'ny vao manomboka
Raha nitady a boky torolàlana android ary nahita ity lahatsoratra ity, voalohany indrindra, tongasoa. Safidy roa no nahatongavanao hatreto. Na ianao dia iray amin'ireo "hafahafa" izay nanohitra ny fanananao Smartphone ary nanapa-kevitra ianao tamin'ny farany fa ho maoderina, na avy amin'ny rafitra miasa hafa ianao ary te-handray ny dingana mankany amin'ny Android, ny rafitra fiasa finday sy ny hatsarany. Angamba mbola eo am-pikarohana ianao ary te hahalala ny fomba fiasan'ny zava-drehetra. Mihabetsaka hatrany no mandray ny dingana, ankoatry ny zavatra hafa satria mahatsapa izy ireo fa tsy mifandray amin'ny ambiny.
Raha toa ianao ka iray amin'ireo nanapa-kevitra tamin'ny farany hoe "handeha hamaky ny hoop" ary hividy smartphone Android dia lazao aminao fa tsy hanenina ianao. Androany hiaraka aminao izahay tsikelikely amin'ny alàlan'ny fikirana fikirakirana Android rehetra ka ny zavatra niainanao dia mahafa-po araka izay azo atao. Ho eo anilanao izahay hitarika anao sy hanampy anao hampandeha tanteraka ny findainao vaovao. Avy aiza ianao, hoy aho, tongasoa amin'ny Android.
1 Inona no atao hoe Android?
2 Rafitra misokatra ho an'ny rehetra
3 Inona avy ireo sosona fanaingoana amin'ny Android?
4 Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Google
5 Serivisy Google maimaim-poana
5.1 Serivisy Google ho an'ny asa
5.2 Handamina anao
5.3 Valiny amin'ny fanontaniana
5.4 Fialamboly sy fialamboly
6 Fikirakira fototra ny findainao Android
6.1 Ahoana ny fametrahana ny fiteninao amin'ny Android
6.2 Ahoana ny fametrahana ny fitaovanao Android ho "fitaovana vaovao"
6.3 Misafidiana tambajotra wifi ho an'ny finday avo lenta Android
6.4 Ahoana ny fomba hidirana amin'ny kaonty Google anay.
6.5 Ahoana ny fomba hanampiana kaonty mailaka hafa
6.6 Hamafiso ny rafitra fiarovana sy famohana amin'ny Android
7 Ahoana no hahafantaranao raha toa ka vaovao ny rafitry ny rafitra Android-ko
8 Ahoana ny fomba fampidinana fampiharana amin'ny Android
9 Ahoana ny fametrahana na fanesorana ny apps amin'ny Android
10 Fampiharana tena ilaina amin'ny Android
10.1 Tambajotra sosialy
11 Fampiharana mahasoa ho an'ny finday avo lenta
12 Fiarovana Android
13 Ahoana ny fomba hamerenako ny data amin'ny Android
14 Ahoana ny famindrana ny angon-tsaiko amin'ny Android amin'ny iPhone
14.1 Google Drive ho an'ny iOS
14.2 Google Photos for iOS
14.3 Mifindra Contact Transfer / Backup
15 Vonona handentika ny tenanao amin'ny tontolon'ny Android ianao izao
Inona no atao hoe Android?
Raha vaovao amin'ity tontolon'ny finday finday ity ianao dia tsy hiditra amin'ny fifandrafiana mandrakizay. Tokony ho fantatrao izany Android no rafitra fiasan'ny finday an'i Google. Ary ahoana ny rafitra miasa ho an'ny fitaovana finday be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao. Ny isan'ny mpampiasa mavitrika napetraka tato ho ato mihoatra ny roa miliara. Tsy misy na inona na inona. Ary androany dia mifaninana saika amin'ny rafitra fiasan'ny Apple, izay mihoatra ny avo roa heny amin'ny isan'ny mpampiasa. Azontsika lazaina izany Firenena Android i Espana satria maherin'ny 92% amin'ireo finday avo lenta eto amin'ny firenentsika no miasa eo ambanin'ny rafitra android maitso.
Ao amin'ny 2017 Android 10 taona lasa izay taorian'ny nanombohany. Miasa am-pahavitrihana nanomboka tamin'ny taona 2008 tamin'ny fitaovana finday, takelaka, ary tato ho ato amin'ny entina ampiasaina. Noforonina tamin'ny alàlan'ny fanampiana ara-bola an'ny Google an'ny orinasan-rindrambaiko "Android Inc.", izay hiafaràny ho azon'ny Google amin'ny taona 2005. Ny rainy fantany, Andy Rubin, miaraka amina ekipa injeniera voafantina mikasa hamorona rafitra mifototra amin'ny Linux. Toy izao no nahitana ny rafitra fiasan'ny Android.
Rafitra misokatra ho an'ny rehetra
Ny tombony omen'ity rafitra miasa ity mihoatra ny rafitra iOS an'ny Apple dia ny rafitra misokatra. Ny mpanamboatra rehetra dia afaka mampiasa azy io ary mampifanaraka azy amin'ny fitaovany. ary misy developer afaka mamorona rindranasa mitovy amin'izany misaotra kit iray atolotry Google ho fampidinana maimaimpoana. Raha fintinina, hahafahana mampiasa azy io maimaimpoana ho an'izay namboarina. Rafitra miasa ho an'ny fitaovana finday avo lenta. Amin'izao fomba izao, marika rehetra manao Smartphone, miaraka amin'ny fahazoan-dàlana Google voatery, azonao atao ny mampiasa Android ho toy ny rafitra miasa. Izay Apple, ohatra, tsy manao. Fironana ankehitriny fa na ireo mpanamboatra nampiasa ny OS-ny aza, toa ny BlackBerry ohatra, dia resy tamin'ny rafitra manerantany kokoa.
Android dia a rafitra miasa mifototra amin'ny firafitry ny fampiharana. Ireo lehibe indrindra, heverina ho fototra ho an'ny fampiasa azy ireo, dia ampidirina ho fari-piadidian'ny rafitra fiasa mihitsy. Rafitra miorina amin'ny maritrano natao hanamorana ny fampiasana indray ny singa. Noho izany, ny rindranasa rehetra dia afaka mampiasa ny loharanon'ny fitaovan'ny fitaovana ary afaka soloina ny mpampiasa. Aorian'izay dia hiresaka momba ny rindranasa, ny fametrahana azy ireo izahay ary hanome torohevitra vitsivitsy anao.
Inona avy ireo sosona fanaingoana amin'ny Android?
Araka ny efa nohazavainay, ny ankamaroan'ny mpanamboatra ankehitriny dia mampiasa ny rafitra Google hamelomana ny fitaovan'izy ireo. Ary misy orinasa sasany izay, amin'ny fikasana ny hanavahana ny tenany amin'ny hafa, dia mampiasa ilay antsoina hoe personalization layer. Izany dia, hazavaina amin'ny fomba tena sary, toy ny "Akanjo" ny rafitra Android amin'ny akanjo hafa. Ny rafitra fandidiana dia mijanona ho iray ihany, saingy amin'ny endriny dia tsy mitovy. Ny sary asehony dia tsy mitovy amin'ilay noforonin'i Google. Eto ny haavon'ny fanatsarana dia mitana andraikitra lehibe tratra izany tamin'ny alàlan'ny fampidirana sosona amin'ny Android.
Misy ny orinasa, toa an'i Sony, izay mihatra sosona fanamafisana mahery setra kokoa, na dia famerana ny fidirana configur aza amin'ny tranga sasany. Ireo marika toa an'i Xiaomi, izay manana kinova amin'ny rafitra fiasa, antsoina hoe MIUI, dia nahazo famerenana tsara avy amin'ireo mpampiasa azy. Ary misy ny hafa izay misafidy ny hanolotra Android "madio", madio kokoa ary azo alamina.
Manandrana ny loko. Fa izahay kosa manohana Android tsy misy fetrany ary tsy misy "takona". Hatramin'ny indraindray ireo sosona ireo dia miteraka rafi-pitetezana efa miasa sy miasa tsara mijaly noho ny fiadana tsy ilaina.
Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Google
Mety tsy manana Smartphone Android ianao, fa azo atao tsara ny manana kaonty mailaka "gmail". Raha efa anananao io dia ho identité anao hahafahanao mampiasa ny serivisy Google rehetra. Raha mbola tsy namorona ny kaonty Google anao ianao dia mila manao izany alohan'ny manomboka amin'ny fikirakirana ny fitaovanao.. Mba hanaovana izany dia tsy mila mihoatra ny roa minitra ianao. Amin'ity boky torolàlana Android ity dia manazava ny zava-drehetra izahay. Ny fomba fiasa dia toy ny famoronana kaonty mailaka satria hanao izany ihany koa ianao. Ny olana tokana hitanao dia efa misy mampiasa ny anarana tadiavinao. Ho an'ny ambiny, ao anatin'izany ny andiana data manokana, dia hamorona avy hatrany ny maha-Google anao ianao fa raha manana fisalasalana ianao, eto izahay dia manazava tsikelikely sy ireo fomba samihafa hahatonga mamorona kaonty google.
Vantany vao fantatra ianao dia vonona hiditra any amin'ny magazay fampiharana lehibe indrindra misy, ny Play Store. Toy izany koa no azonao atao mampiasà amin'ny findainao Android amin'ny serivisy rehetra atolotry ny Google tsy andoavam-bola. Raha ny fitsipika ankapobeny dia ireo no rindranasa rehetra efa napetraka mialoha ny fitaovantsika. Miankina amin'ny marika an'ny fitaovana, mety miaraka amin'ny sasany an'ny orinasa izy ireo toy ny mpilalao mozika, sns.
Serivisy Google maimaim-poana
Google dia matotra amin'ny fanamorana ny fiainantsika. Ary manolotra anay andiana fitaovana izay ahafahantsika mahazo tombony betsaka amin'ny finday avo lenta amin'ny fomba mahazo aina indrindra. Be dia be izy ireo ary maro karazana ka afaka manavaka ny sokajy karazana serivisy atolotry ny Google maimaim-poana. Ao amin'ny torolàlana Android anay dia nifantina ireo izay afaka manolotra anao betsaka indrindra izahay amin'ny voalohany.
Serivisy Google ho an'ny asa
Amin'ity fizarana ity dia azontsika atao ny mampiasa
Google Documents, un mpamoaka lahatsoratra an-tserasera ahafahanay manova sy mizara izay antontan-taratasy na aiza na aiza misy anao.
Takelaka Google izany ve dia takelaka fisoratana anarana, fa cmiaraka amin'ny fahafaha-mizara azy, manao azy ampahibemaso amin'ny fanitsiana iray na maromaro, ary mampiasa azy io na aiza na aiza.
Fampisehoana Google, ny zavatra akaiky indrindra ho fantatrao amin'ny maha "power point" anao. Fandaharam-potoana tena ampiasaina mora ampiasaina sy milalao ny fampisehoana nataonao.
Google Drive, "toerana" azo antoka itahirizana kopian'ny rakitrao antontan-taratasy efa nampiasaina, eny na dia ny angona fampiharana aza.
Google dia manome antsika fotoana ahafahana mandamina bebe kokoa. Ary manana ny atiny tena sarobidy indrindra amin'ny finday finday na aiza na aiza. Ka dia azontsika atao izany
Google Photos, izay tsy vitan'ny fandaminana ny fisamborana anay fotsiny. Ataovy mandeha isaky ny daty na toerana ny rakipeo. Ho fanampin'ny fanolorana anay hatramin'ny 15 GB fitehirizana mba tsy hitrangan'ireo sary amin'ny habaka amin'ny fitaovantsika.
Google Contacts mahatonga antsika tsy hatahotra ny hanova telefaona intsony noho ny fahaverezan'ny isa voatahiry, na ny fampitana azy ireo amin'ny tanana. Ampifanaraho amin'ireo kaonty Google anao ny fifandraisana ary ho eo amin'izay toerana ahitanao ny tenanao izy ireo.
Google Calendar, ny kalandrie Google mba tsy hanadinoanao na inona na inona, ary hanoratanao ny zava-drehetra. Filazana, fampahatsiahivana, fanairana, tsy hisy ho afa-mandositra anao.
Valiny amin'ny fanontaniana
Fa maninona no tadiavina finday avo lenta isika raha tsy afaka manontany an'izany, sa tsy izany? Manana Google eo am-pelatananao tombony io. Amin'ny alàlan'ny widget Google efa napetraka dia afaka manontany isika amin'ny firesahana amin'i Google momba ny zavatra rehetra. Na mitadiava sy mivezivezy amin'ny alàlan'ny fampiharana fanta-daza ny fanamorianao. fahavalo
Google Chrome mikaroka sy mivezivezy amin'ny alàlan'ny fampiharana fanta-daza amin'ny fanamoriana
Google Maps. Na te hahafantatra ianao hoe aiza no misy na ahoana no ahatongavana any, ilay "G" lehibe dia eo hanampy anao eo noho eo. Tsy mandao anao na aiza na aiza misy anao i Google.
Dikanteny Google, Hahatonga azy io na aiza na aiza misy anao, tsy ho sakana ho anao koa ilay fiteny.
Fialamboly sy fialamboly
Ny finday avo lenta finday dia mitovy dika mitovy amin'ny fanelingelenana. Ary dia toy izany koa, efa maivamaivana vetivety isika rehetra tamin'ny fiandrasana ela. Misy koa ireo mampiasa ny findainy Android ho ivon-toeran'ny fialamboly haino aman-jery. Ho an'ity dia afaka mankafy fampiharana isan-karazany isika.
YouTube. Ny sehatra video streaming par tsara indrindra. Alefaso ireo horonan-tsary tianao indrindra, zarao izany na ampidiro ny anao manokana.
Mozika Google Play mametraka mpilalao multimedia mahay eo an-tananao. Ary ankoatry ny fitendrena ny mozika avy amin'ny fitaovanao dia azonao atao ny miditra amin'ireo hira vaovao farany amin'izao fotoana izao. Na mividiana ny rakikira farany nataon'ny mpanakanto tianao.
Sarimihetsika Google Play Toy ny amin'ny mozika, makà ny vaovao farany amin'ny sarimihetsika, fandaharana amin'ny fahitalavitra na andian-tantara.
Ireo no serivisy malaza indrindra, saingy manome anao bebe kokoa bebe kokoa i Google. Araka ny hitanao, izao tontolo izao azo atao amin'ny fitaovana Android. Fantatrao ve ny zavatra rehetra tsy ampy nataonao? Azo antoka fa tsy manenina ianao fa nividy smartphone Android. Ary raha mbola tsy nividy azy ianao dia ho resy lahatra ianao rehefa avy mamaky ity lahatsoratra ity.
Fikirakira fototra ny findainao Android
Efa nividy azy ve ianao? Miarahaba anao. Raha manana ny fitaovana Android anao eo am-pelatananao ihany ianao amin'ny farany tonga ny fotoana hampiomanana azy. Amin'ity boky torolàlana Android ity dia hitarika anao tsikelikely izahay hanatanterahana ny fanaingoana voalohany. Rehefa avy nanala ny findainao vaovao tao anaty boaty izy dia tsy maintsy ampio aloha ny karatra SIM anay. Ary tsy misy tahotra, tsindrio ny bokotra herinaratra hanombohana ny fikirakirana.
Ahoana ny fametrahana ny fiteninao amin'ny Android
Io no zavatra voalohany tokony hataontsika rehefa mampandeha ny fitaovana Android vaovao isika. Aorian'ilay hafatra fandraisana diplaomatika izay miarahaba antsika tsy maintsy misafidy ny fiteny hifandraisantsika amin'izany fotoana izany amin'ny finday avo lenta isika. Amin'ny lisitr'ireo fiteny be dia be no hofidintsika izay sahaza azy, ary dia izay.
Raha te hanova ny fiteny isika amin'ny fotoana rehetra voafidy ao amin'ny fikirakirana voalohany dia afaka manao azy mora foana isika. Izahay dia tsy hitarika ao amin'ny menio an'ny finday avo lenta mankany «Fikirana». Ary avy eto, miditra ao anatiny "Fikirana mandroso" tsy maintsy mitady ny safidy isika "manokana". Avy amin'ity toerana ity, amin'ny fipihana eo "Fampidirana fiteny sy lahatsoratra" Azontsika atao ny miditra amin'ny lisitry ny fiteny ary manova azy amin'ny iray tadiavintsika.
Ahoana ny fametrahana ny fitaovanao Android ho "fitaovana vaovao"
Ny kinova farany azo atolotra an'ny Android Safidy fanamboarana vaovao rehefa hanangana smartphone izahay. Noho izany, raha sanatria ka manavao ny teo aloha ilay finday novidiana vaovao dia ho mora amintsika kokoa. Manomboka amin'ity, azontsika atao ny manamboatra ny telefaona vaovao amin'ny safidy mitovy amin'ilay taloha. Na dia miaraka amin'ireo rindranasa napetraka ihany aza, ny lakilen'ny Wi-Fi, sns.
Saingy tsy izany no zava-misy eto amintsika ankehitriny. Ary mba hanohizana ny fikirakirana fototra dia tsy maintsy mifidy ny safidy isika "Atsangano ho fitaovana vaovao". Amin'ity fomba ity no hampidirina voalohany ireo dingana sy setting manaraka. Ka ndao hiroso amin'ny dingana manaraka.
Misafidiana tambajotra wifi ho an'ny finday avo lenta Android
Na dia ny dingana amin'ny fisafidianana tambajotra Wi-Fi aza tsy takiana tanteraka hamita setup an'ny fitaovana vaovao. Raha tena ampirisihina mafy hanao ireo fiasa ireo amin'ny Internet. Amin'ity fomba ity dia ho feno ny fikirakirana ny fitaovana. Ao amin'ny lisitry ny tamba-jotra Wi-Fi misy, tsy maintsy misafidy ny antsika isika. Mba hanohizana, aorian'ny fampidirana ny kaody fidirana dia tsy maintsy misafidy «tohiny» isika.
Matetika ny mampiasa tamba-jotra Wi-Fi mihoatra ny iray tontolo andro. Noho io antony io ary hahafahanao manampy ny tambajotra rehetra ilainao dia manazava izahay ny fomba fanaovana azy amin'ny fotoana hafa. Miditra amin'ny kisary indray isika «Fikirana» ny fitaovantsika ary safidio ny safidy «Wifi". Rehefa navotsotra ny fifandraisana Wi-Fi dia ho hitantsika ireo tambajotra misy ao anaty lisitra iray. fotsiny tsy maintsy misafidy ny tambajotra irina isika ary mampiditra ny kaody fidirana. Hifandray hatrany amin'ireo tambajotra voatahiry ny fitaovantsika rehefa ao anatin'ny fandrakofana azy isika.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny kaonty Google anay.
Heverinay fa efa nanana kaonty Google izahay na namorona azy manaraka ny torolalana etsy ambony. Ny fahazoana azy io sy ny fahafahanao mankafy ny serivisy atolotray ny kaontinay dia tena tsotra. Mila manao izany fotsiny isika ampahafantaro anay amin'ny kaonty "xxx@gmail.com" izahay ary ampidiro ny tenimiafinay. Raha vantany vao vita izany dia tsy maintsy manaiky ny fepetra amin'ny serivisy isika mba hanohizana ny dingana manaraka.
Azo atao ihany koa ny manohy ny fikirakirana raha tsy manana kaonty "gmail". Saingy mamporisika anao indray izahay hanao izany aminy. Amin'izany no ahafahantsika mankafy tanteraka ny fonosin'ny serivisy atolotry ny Google antsika. Ary noho izany ny fanaingoana dia ho feno kokoa amin'ny lafiny rehetra.
Ahoana ny fomba hanampiana kaonty mailaka hafa
Vantany vao vita ny dingana teo aloha, dia hanontany antsika ny menio fikirakiraina raha te hanampy kaonty mailaka hafa izahay. Eto azontsika atao ny manampy ny sisa amin'ireo kaonty mailaka ampiasainay assiduous. Na an'ny Google na an'ny mpandraharaha hafa. Ny rindranasan'ny Gmail dia hikarakara ny fandaminana azy ireo amin'ny lahatahiry. Azonao atao ny mahita ny mailaka rehetra amin'ny fotoana iray na mifantina tsirairay ireo boaty, alefa sns.
Toy ny amin'ny tambajotra Wi-Fi, rehefa vita ny fizotran'ny fikirakirana ny fitaovana dia afaka mampiditra kaonty mailaka betsaka araka izay ilaintsika koa isika. Ho an'ity dia handeha amin'ny kisary miverimberina isika «Fikirana» aiza no tokony hitadiavantsika ny safidy "Kaonty". Avy eto no hisafidianantsika "ampio kaonty" ary hampiditra ny anaran'ny kaonty, tenimiafina sns. Ary eo no ho eo dia hipoitra ao anaty boaty misy ny sisa.
Hamafiso ny rafitra fiarovana sy famohana amin'ny Android
Amin'ity lafiny ity, ny safidy fiarovana azon'ny fitaovantsika atolotra antsika dia mitana andraikitra lehibe. Izany hoe, miankina amin'ny tombontsoa mifandray azonao. Amin'izao fotoana izao dia saika misy fitaovana vaovao feno fitaovana mpamaky ny rantsantanana. Ary na dia misy aza ny telefaona izay mbola tsy mampiditra an'ity teknolojia ity dia misy ihany koa ireo izay manana mpamaky iris o fankasitrahana amin'ny tarehy.
Raha tsy misy ny fampitaovana ao amin'ny rafitra fiarovana dia tsy tokony hatahotra isika. Mbola azo antoka ihany koa amin'ny antoko fahatelo raha mampiasa tsara ireo fitaovana atolotry ny Google ho antsika isika. Afaka manana lamina mamoha hatrany isika na atao amin'ny alàlan'ny a kaody isa. Amin'ity dingana ity dia afaka misafidy iray na mampifangaro azy ireo fotsiny isika. Amin'ny lafiny iray na hafa dia manoro hevitra foana izahay ny mampiasa iray.
Ity no dingana farany amin'ny fametrahana fototra ny fitaovantsika, saingy tsy ny zava-dehibe indrindra amin'izany. Raha vantany vao nifidy ny rafitra fiarovana isika dia efa ho vonona ny smartphone. Ireo toe-javatra ireo dia matetika eo amin'ny fitaovana Android rehetra. Saingy mety miova ny filaharana arakaraka ny lamina fanaingoana sy ny kinovan'ny rafitra fiasa izay ananantsika.
Miorina amin'ny toerana misy anay, dia hisafidy ny faritra mety aminy izahay. Avy any isika dia afaka mahazo antoka fa marina ny fotoana asehon'ilay fitaovana.
Ankehitriny eny, afaka mankafy ny fitaovana vaovaontsika amin'ny fahaiza-manao feno isika. Fa aloha, afaka manome anao kely mikasika ny personalization izahay. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo marika mampiavaka an'ity rafitra fiasa ity, ny mety hanomezana azy ny endrika tiantsika indrindra. Avy amin'ny fanaingoana fototra ny fitaovana azontsika atao ny misafidy ny lohahevitra, ireo feo na hafatra izay tena tiantsika indrindra. Tahaka azy ihany temotra hidin-trano na fampiasana efijery. Na koa ny lokon'ny LED fampandrenesana mifandraika amin'ny fampandrenesana tsirairay.
Ahoana no hahafantaranao raha toa ka vaovao ny rafitry ny rafitra Android-ko
Raha isaina amin'ireo rindranasa efa napetraka mialoha natolotr'i Google antsika, ny Smartphone dia efa miasa tanteraka saika ho an'ny asa rehetra. SAINGY Alohan'ny hanohizanao amin'ny fametrahana ny rindranasa ivelany dia mahaliana ny manamarina raha toa ka vaovao ny rindrambaiko. Mba hanaovana izany, ao anatin'ny menio ao amin'ny fitaovana no handehanantsika "Settings". Hikaroka ny safidy isika "Momba ny fitaovako" ary tsindrio eo io. Vantany vao misokatra ity safidy ity dia tsy maintsy mifidy isika "Mikaroha vaovao farany" (na safidy mitovy amin'izany). Ny telefaona mihitsy dia hanamarina raha misy fanavaozana miandry hapetraka.
Raha misy fanavaozana miandry dia mila tsindrio fotsiny isika "Sintomy sy apetraka" ary avy hatrany dia hanomboka ny fisintomana, izay hapetraka ho azy. Ity dingana ity dia mety maharitra minitra vitsy ary ho vaovao ny finday. Mariho fa tsy ho afaka ny hisintona ny fanavaozana ianao miaraka amin'ny bateria tsy latsaky ny dimam-polo isan-jato.
Amin'ny maha-tendrony azo ampiharina azy dia mety hanatanterahana an'io asa io amin'ny fifandraisana wifi. Satria ny fampidinana ny fanavaozana ny rafitra fiasa dia mety hampitombo ny fanjifana angon-drakitra mihoampampana.
Ny rafitra fandidiana vaovao dia azo antoka sy mahomby kokoa hatrany. Ny fanatsarana ny fitaovana amin'ny fampiasa azy manokana sy amin'ny fampiharana dia tsara kokoa hatrany miaraka amin'ny kinova farany misy. Ny fanavaozana ny vanim-potoana vaovao dia hanakana anao tsy hahita olana amin'ny fampifanarahana fampiharana, ary na ny fanjifana bateria aza mety hihatsara.
Ahoana ny fomba fampidinana fampiharana amin'ny Android
Eny eny. Vonona handray rindram-baiko ny Smartphone. Afaka misintona sy mametraka rindrambaiko betsaka araka izay tadiavintsika isika izao. Ary ny torohevitray lehibe dia ny hanaovantsika izany avy amin'ny magazay ofisialy, Google Play Store. Ao anatin'izany no ahitantsika ireo fampiharana efa ho iray tapitrisa eo amin'ny serivisinay ho an'ny zavatra rehetra azontsika eritreretina. Mila tsindrio fotsiny ny kisary Play Store izay efa napetraka mialoha amin'ny alàlan'ny default ary afaka miditra.
Sivan'i sokajy izay ahitantsika azy, ohatra, fialamboly, fomba fiainana, sary, fanabeazana, fanatanjahantena, ary toy izany hatrany hatrany amin'ny safidy mihoatra ny telopolo. Afaka misafidy ny hikaroka amin'ireo malaza indrindra isika, na hikaroka lalao, sarimihetsika, mozika. Safidy tsy manam-petra izay hahitantsika ny fampiharana tadiavintsika.
Mametraka fampiharana amin'ny fitaovantsika, ny zavatra voalohany dia ny fidirana amin'ny Play Store. Rehefa tafiditra ao anaty, rehefa hitanay ny fangatahana tadiavina, mila fotsiny ianao kitiho eo. Rehefa manokatra azy isika dia afaka mahita ny fampahalalana mifandraika amin'ny atiny ao, mahita ny pikantsary amin'ilay App mihitsy, ary mamaky ny fanehoan-kevitra mihitsy aza ary mahita ny naotin'ny mpampiasa. Ary koa ny fanamarinana fa maimaimpoana na fandoavana ny fangatahana.
Ahoana ny fametrahana na fanesorana ny apps amin'ny Android
Raha naharesy lahatra anay ianao dia marina mila tsindrio "install" isika. Hanomboka hisintona sy hametraka azy eo amin'ny fitaovantsika avy hatrany ilay rindranasa. Ary rehefa vita ny fametrahana dia hamorona sary masina vaovao eo amin'ny birao ny fampiharana. Raha hanokatra azy io sy hampiasa azy dia mila tsindrio fotsiny ilay kisary izy. Hitanao ve ny mora? Tsy ho mora ny misintona sy mametraka fampiharana.
fa, Ahoana raha tsy tiako ilay fampiharana nakariko? Tsy misy olana, azontsika atao ihany koa ny manala azy ireo mora foana. Safidy iray no mankany "Fikirakirana". Mifidy eto isika "Applications" ary ho hitantsika ny lisitry ny rindranasa napetraka. Amin'ny fipihana ny rindranasa tiantsika esorina dia miseho ny menio izay tsy maintsy safidintsika "Esory". Na, miankina amin'ny kinova Android ampiasainay, amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana ny rindranasa rehetra, dia misy hazofijaliana mipoitra amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Ary amin'ny fipihana eo amin'ny hazo fijaliana dia hoesorina koa ilay rindranasa.
Fampiharana tena ilaina amin'ny Android
Noho ny safidy marobe natolotry ny Play Store antsika dia samy hafa amin'ny finday iray hafa ny finday avo lenta tsirairay. Milaza zavatra betsaka momba anao ny fitaovanao. Amin'ny fijerena ireo rindranasa napetraka dia afaka mahafantatra izay tiana sy safidintsika isika. Fanatanjahan-tena, lalao, mozika, sary. Betsaka ny safidy azontsika alaina ka sarotra ny manao safidy izay hanomezana fahafaham-po ny olon-drehetra.
Na izany aza, afaka nifanaraka tamin'ny ankamaroan'ny maro isika andiana fampiharana "ifotony"”. Ary hanoro hevitra anao ireo izay atolotra ho anay izahay. Anisan'izy ireo no nisafidianantsika ny malaza indrindra amin'ny sehatra tsirairay. Ny fametrahana azy ireo dia hahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ny findainao Android vaovao.
Ny fampiharana manokana an'ny tambajotra sosialy dia ny "abc" an'ny rindranasa alaina ho an'ny finday avo lenta. Ary ambonin'ireo rafitra miasa, marika ary maodely izy ireo. Ka tsy azontsika atao ny tsy miraharaha ireo fampiharana izay mankamamy ny ora fampiasana indrindra. Ny smartphone dia tsy azo eritreretina raha tsy misy ireo rindranasa ireo. Miaina ho an'ny tsirairay ary ny mifamadika amin'izany.
Araka ny ny tambajotram-pifandraisana, Azonay lazaina aminao kely izay tsy fantatra momba ity tambajotra sosialy ity. Ny zava-misy dia raha nanapa-kevitra ny handray ny dingana mankany amin'ny Smartphone ianao ary mbola tsy manana kaonty Facebook dia izao no fotoana.
Iray amin'ireo tambajotra sosialy ilaina mba hifandraisana amin'izao tontolo izao. Tany am-boalohany dia torontoronina ho serivisy fanoratana bilaogy bitika kely. Ary niova ho fisaorana noho ny fampiasana azy, ary mazava ho azy ireo mpampiasa azy fitaovana fampitaovana tena izy. Ny personalities, ny manampahefana, ny haino aman-jery matihanina sy ny mpankafy dia mifangaro tanteraka amin'ny fampahalalana sy hevitra tsy azontsika odian-tsy jerena
Ny tambajotra sosialy ho an'ireo tia sarymankany Na izany no fomba voalohany nahatongavany tamin'ny finday avo lenta. Navadika ho sehatra matanjaka hahitana olona, ​​sary, tantara ary na orinasa mahaliana aza. Tsy tokony hanjavona Instagram amin'ny smartphone Android vaovao.
Ny fifandraisana no tanjona voalohany amin'ny telefaonana, na marani-tsaina na tsia. Ary araky ny fantantsika dia niova ny endrika fifandraisantsika ankehitriny. Saika tsy misy antso an-tariby intsony. Ary miaraka amin'ny Smartphone Android eo am-pelatananao, tsy maintsy atao ny mametraka roa amin'izy ireo farafaharatsiny.
Es fampiharana fandefasan-kafatra malaza indrindra eto an-tany. Iza no tsy mampiasa WhatsApp androany? Misy aza ny orinasa sasany izay mampiditra an'ity rindranasa ity, izay ahitantsika ireo efa napetraka mialoha. Fampiharana fototra ho eto amin'izao tontolo izao
Heverina ho "ny hafa" ataon'ny maro. SAINGY voafidy tsara kokoa noho ny WhatsApp amin'ny fampitahana tsy hita isa. Ny fotony dia mitovy amin'ny an'ny mpifaninana aminy. Fa miaraka a asa mitohy amin'ny fanavaozana sy amin'ny fampiharana ny fampiasa isan-karazany mahavita zavatra maro noho ny WhatsApp.
Fampiharana mahasoa ho an'ny finday avo lenta
Ireo rindranasa voalaza etsy ambony dia ireo izay ho hitanao amin'ny telefaona finday rehetra miasa ankehitriny. Saingy ao amin'ny haben'ny Google Play Store dia misy toerana bebe kokoa. Ary misy fampiharana izay afaka manompo anao amin'izay ilainao fotsiny. Fampiharana izay tsy isalasalana fa homen'izy ireo tombo-kase ilaina iray hafa ny smartphone sy ny fiasa.
Noho izany, eto ambany dia hanolotra ny sasany amin'ireo rindranasa izay tiantsika indrindra ary mazava ho azy fa ampiasainay isan'andro. Ho an'ny maro, ny smartphone dia endrika iray hafa amin'ny fifandraisana sy fialamboly. Fa ho an'ny maro hafa dia fitaovana miasa ilaina ihany koa izy io izay afaka manampy betsaka antsika.
Toerana hitazonana azy rehetraToy izao ny famaritan'ny fampiharana ny tenany izay afaka manampy anao ho voalamina bebe kokoa. Heverina ho kahie nefa manompo bebe kokoa. Azonao atao ny manangona sary, rakitra, audio, na naoty an-tsoratra. Izy io dia fampahatsiahivana amin'ny fanendrena na asa tokony hatao. Iray amin'ireo fampiharana feno indrindra ho an'ny birao na ho an'ny zavatrao izay nivoatra be indrindra.
Ny vaovao sy mahasoa momba an'ity rindranasa ity dia izany azonao atao ny mampiasa azy amin'ny fitaovanao rehetra. Ary ho ampifanarahinao foana izy ireo miaraka. Ka tsy mila miahiahy mitady notafa amin'ny findainao na ny takelakao ianao. Izay soratanao amin'ny Evernote dia ho amin'ny fitaovana ampiasainao rehetra. Iray amin'ireo fampiharana ilaina indrindra ho hitanao.
Evernote - Fanamarihana Organizer & Daily Planner
iray hafa fitaovana tsara ho an'ny fandaminana asa. Mety hatao asan'ny vondrona. Mamorona tabilao ary zarao amin'izay ilainao hiaraha-miasa. Ianao dia afaka mamorona lisitra ao anaty tsanganana tena hita maso. Y fenoy karatra izy ireo, ohatra, avy amin'ny to-dos. Ireo karatra ireo dia azo sintonina avy eo amin'ny tsanganana mankany amin'ny tsanganana mora, ohatra, avy amin'ny to-dos ka hatramin'ny asa vita.
Raha mizara birao na asa amin'ny ekipa ianao, dia tsy afaka mieritreritra fomba azo ampiharina sy ilaina kokoa handaminana ny tenanao. Mizarà ny solaitranao amin'ireo mpiara-miasa aminao. A) Ie ny olon-drehetra dia hanana ny fahazoana vaovao farany momba ny asa miandry sy vita. Fampiharana tena atoro anao.
Trello: Mandamina zavatra na iza na iza, na aiza na aiza!
Iray amin'ireo rindranasa izay mahazo toerana hatrany eo amin'ireo ankafizinay. Miaraka amin'ny teny filamatr'i "Tehirizo fa ho avy", dia manampy antsika tsy hahita zavatra mety mahaliana antsika. Ataovy ao anaty "paosinao" ary vakio rehefa manam-potoana ianao. Afaka mamonjy lahatsoratra sy vaovao tsy misy fetra ianao. Ary azonao atao aza ny manafatra azy ireo mifanaraka aminao indrindra. Tsy isalasalana fa fitaovana natao ho antsika tsy mijanona. Ary tena ilaina izany raha tsy tara lahatsoratra manan-danja ho antsika. inona no tena mahaliana antsika.
Ilaina ny paosy satria mora ampiasaina. Haingam-pandeha ny fitahirizana publication amin'ny "paosinao". Aorian'ny fametrahana Pocket dia misy fanitarana miaraka amin'ny kisary. Ny fampiasana ny safidy fizarana dia afaka mamonjy amin'ny paosy ho azy. Ary tsy mila miditra amin'ilay rindranasa fotsiny isika raha te hitady izay rehetra tadiavintsika ho tehirizina taty aoriana. Hevitra lehibe mety hanampy be antsika.
Paosy: Mitsitsia. Vakio. Mitombo.
Ity rindranasa ity dia noforonina tamin'ny hevitra nitovy tamin'i Pocket. Na dia misy karazana haino aman-jery hafa aza. Ny tontolon'ny podcast mahazoa integer bebe kokoa noho io karazana sehatra io. Fandaharana, fialamboly, kolontsaina na fandaharana mozika. Ny zava-drehetra dia mifanaraka amin'ny iVoox. Sehatra goavambe sy voalamina tsara izay ahafahanao mihaino ny fandaharana amin'ny radio tianao indrindra isaky ny tianao.
Raha tsy afaka mihaino ilay fandaharana amin'ny radio tianao indrindra ianao dia efa any amin'ny iVoox izany. Afaka misoratra anarana amin'ny famoahana hafa ianao. Amin'ity fomba ity no hahafantaranao rehefa misy atiny vaovao mifandraika amin'ny tsironao sy ny programa arahinao. Tsy ny asa rehetra no hatao, sa tsy izany? Mpiara-miasa tonga lafatra amin'ny fotoam-pialam-boly.
Podcast & Radio iVoox - Audio tsy misy fetra
Developer: iVoox Podcast sy Radio
Afaka manoro hevitra anao amin'ny fampiharana izahay nefa tsy mijanona mandritra ny fotoana maharitra. Ireto no sasany ampiasainay indrindra ary heverinay fa ilaina indrindra. Fa satria ny mpampiasa tsirairay dia tontolo. Ny torohevitra tsara indrindra dia ny misitrika hatrany amin'ny Play Store ary mahita ny "harena" manokana anananao. Raha mila rindranasa hahazoana zavatra azo antoka ianao dia ao amin'ny magazay fampiharana Google.
Ara-dalàna ny mamaky sy mandre izany Android dia tsy rafitra fandidiana azo antoka. Na farafaharatsiny tsy zato isan-jato. Ary amin'ny ampahany dia marina izany. Zavatra iray, etsy ankilany, no rafitra fampiasa indrindra manerantany, dia ara-dalàna fa izy io no tena notafihan'ny malware. Mba hitazomana ny fitaovantsika ho azo antoka, dia misy andiana fampiharana sy antivirus hampiasaina hifehezana ny "fanadiovana" ny findaintsika.
Mila mitadidy izany ianao ny fiarovana ny fitaovantsika dia miankina betsaka amin'ny risika anaovantsika azy ireo. Fidirana amin'ireo tranonkala manana laza mampiahiahy. Sokafy mailaka mampiahiahy. Na koa misintona rindrambaiko ambany kalitao sy avo lenta. Araka ny hitantsika dia misy karazana aretina azo atao maromaro. Soa ihany, Android dia miasa tsy tapaka amin'ny fanatsarana ny filaminana. Ary manamarina tsara ireo fampiharana mety hampidi-doza amin'ny alàlan'ny fandroahana azy ireo hiala ny Play Store.
Amin'ny maha-mpampiasa Android mavitrika ahy hatramin'ny nanombohany dia tsy maintsy milaza aho fa mbola tsy nahita olana lehibe noho ny aretina virus tamin'ilay finday avo lenta. Ary zava-misy izany, satria mitranga amin'ny solosaina, izany ny famakafakana tsy tapaka ny fisie amin'ny fitaovana manao programa na rindranasa, dia miafara amin'ny fanemorana ny asany. Noho izany, mba hisorohana ny olana amin'ny viriosy nefa tsy hahavery kely ny zava-bita, dia tsy maintsy mitandrina isika amin'ny atiny lanintsika sy ny niandohany.
Fa raha ny tadiavinao dia ny matory am-pilaminana satria fantatrao fa na aiza na aiza no idiranao ny teny miafinao sy ny angon-drakitrao dia azo antoka, tsara kokoa ny mametraka fampiharana antivirus. Safidy lehibe mety ho Fiarovana 360, heverina ho lozisialy fiarovana finday azo antoka indrindra an'izao tontolo izao. Tsy very maina fa manana fanamarihana 4,6 amin'ny dimy ao amin'ny Play Store. Ho fanampin'ny fananana fampidinana mihoatra ny roanjato tapitrisa.
Fiarovana azo antoka - Antivirus, Booster, Cleaner an-tariby
Developer: Mivoatra ny filaminana azo antoka
Ahoana ny fomba hamerenako ny data amin'ny Android
Toy ny fitsipika ankapobeny dia misy fampahalalana sarobidy ho antsika ny finday avo lenta. Indraindray amin'ny endrika hafatra, na sary sy horonan-tsary. Na koa antontan-taratasy miasa izay tsy tokony ho resintsika. Ka ny data-tsika rehetra dia azo antoka lozam-pifamoivoizana, na fidirana amin'ny antoko fahatelo, tsara kokoa ny fampiasana ireo fitaovana ampiasain'i Google ho antsika.
Misaotra Google Contacts, Google Photos na Google Drive, azontsika atao ny manana fifandraisana sy sary, rakitra na antontan-taratasy soa aman-tsara na aiza na aiza. Fa raha ny tadiavinay dia ny mamorona kopia nomaniny ho solon'izay ao anatin'ilay fitaovana mihitsy, dia holazainay aminao ny fomba fanaovana azy. Raha te hanao kopia nomaniny ho solon'izay isika dia tsy maintsy manokatra ny safidy «Fikirana». Mandeha any amin'ny toerana mandroso izahay ary mitady "Personal". Ny iray amin'ireo toe-javatra dia "Backup".
Ao anatin'ity safidy ity dia manana safidy maromaro misy isika. Azontsika atao ny maka tahaka ny angon-tsoratray amin'ny fitaovana na manao azy amin'ny alàlan'ny kaonty Google anay. Ho an'ity dia tsy maintsy fantarina amin'ny finday avo lenta amin'ny kaontintsika isika. Avy eto dia azontsika atao ihany koa ny mamerina ny toe-javatra misy ny tamba-jotra, raha toa ka misy ny fiovan'ny mpandraharaha, ohatra. Ary azontsika atao ihany koa ny mamerina ny angon-drakitry ny ozinina, raha te-hamafana tanteraka ny fitaovantsika izahay.
Ireo dingana rehetra teo aloha izay nohazavainay dia tena ilaina tokoa raha vaovao amin'ny fitaovana Android ianao. Ary ho toy izany koa izy ireo raha eo alohan'ny fanombohanao amin'ity teknolojia finday ity ianao. Niezaka nanamboatra torolàlana feno izahay mba tsy hahavery anao amin'ny fotoana rehetra. SAINGY Mety hisy ny tranga fa tsy vaovao amin'ny tontolon'ny Smartphone ianao. Ary eny Android ianao.
Ka mba hahatonga ity torolàlana ity ho be mpampiasa kokoa dia hampiditra dingana iray hafa izahay. Izany no fomba hanaovantsika ity fandraisana an-tanana ity ho an'ireo rehetra te-hiditra amin'ny rafi-pitantanana finday malaza eto an-tany. Mpampiasa vaovao sy ireo izay avy amin'ny rafitra miasa hafa. Ary ny fifindrana amin'ny rafitra fiasa iray mankany amin'ny iray hafa dia tsy mametraka sakana.
Ahoana ny famindrana ny angon-tsaiko amin'ny Android amin'ny iPhone
Avy amin'i Google dia noheverin'izy ireo hatrany ny fifindra-monina mety ho an'ny mpampiasa Android amin'ny iPhone. Ary nandritra ny taona maro dia namolavola fampiharana izay manamora ny asan'ny fifindra-angona data amin'ny sehatra iray hafa. Na dia toa mandreraka sy sarotra aza indraindray ny fizotrany. Google manolotra ny sasany fitaovana hanatsotra be ity fifindrana ity amin'ny data Android mankany iOS
Google Drive ho an'ny iOS
Iray amin'ireo fampiharana ilaina indrindra atolotry ny Google maimaim-poana amin'ny alàlan'ny sehatra fampiharana sonia an'ny paoma. Miaraka amin'ity rindrambaiko ity afaka manondrana ny atiny rehetra heverinay fa ilaina izahay avy amin'ny iPhone taloha hananana azy amin'ny Android vaovao. Ary azontsika atao izany amin'ny fanarahana dingana vitsivitsy tena tsotra.
Napetraka amin'ny iPhone, ankoatry ny fahafahany mampiasa azy io ho toy ny fitaovana misy azy, amin'ny fitehirizana sy fanodinana rakitra sy antontan-taratasy. Mety ho isika koa io tena ilaina amin'ny famindrana ny angon-drakitra avy amin'ny iOS mankany Android. Noho izany, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny misintona ity rindranasa ity. Y napetraka indray mandeha amin'ny iPhone, ampahafantaro ny tenanay amin'izany amin'ny kaontinay Google. Amin'ny alàlan'ity kaonty ity dia hadika ny tahirin-kevitra.
Miaraka amin'ny Google Drive for iOS napetraka ao amin'ny iPhone dia tsy maintsy ataontsika izao manaraka izao. Avy amin'ny menio fanovana tsy maintsy mifidy isika "Manaova backup". Tokony hataontsika safidio ny maka tahaka ny angona ao amin'ny kaonty Google Drive anay izay efa hitantsika teo aloha. Raha vantany vao vita izany dia hisafidy ireo rakitra samihafa tianay adika toy ny fifandraisana, sary, hetsika amin'ny kalandrie, eny fa na ny resaka WhatsApp aza. Mora, sa tsy izany?
Rehefa manokatra ny fampiharana mitovy amin'ny finday Android izahay, napetraka mialoha ao amin'ny ozinina, afaka mahazo alalana amin'ny angona kopia rehetra izahay. Avy amin'ny WhatsApp, rehefa apetrakao izy io dia tsy maintsy misafidy ny famerenana amin'ny laoniny ao amin'ny Google Drive hananana ireo chat voatahiry. Hanao toy izany koa isika amin'ny famerenana ireo fifandraisana, kalandrie sns.
Ho famerana ny Google Drive dia afaka mahita isika fa tsy ampy ny fitehirizana atolotray antsika. Amin'ny ankapobeny, ny isan-jato avo indrindra amin'ny fibahanana fahatsiarovana amin'ny Smartphone dia mifanaraka amin'ny sary. Ary ireo no mahatonga ny fitehirizana ho misavorovoro.
Mitovy amin'ny antsika ihany ao amin'ny Apple App Store avy amin'ny Google Drive, vao haingana koa afaka misintona ny Google Photos izahay. Miaraka amin'ny 15 GB tsy misy fikajiana maimaimpoana maimaimpoana dia afaka manamaivana tanteraka ny asa fitahirizana fitaovana izahay. Ary toy izany koa, azontsika ampiasaina eo am-pelatananay ireo sary sy horonan-tsary eo noho eo amin'ny Smartphone Android vaovao.
Na dia foana aza fahazoan-dalana mankany aloha ny fampiharana Google zanatany noho ny solvency sy ny asany efa voaporofo. Azontsika atao ihany koa ny manome sosokevitra App mifandraika izay mety ho hitantsika maimaimpoana ao amin'ny Google Play Store. Raha mbola tsy nanazava ianao amin'ireto dingana manaraka ireto dia misy ny fampiharana izay tsotra sy tsy mety diso.
Mifindra Contact Transfer / Backup
Raha mamindra ny fifandraisana amin'ny iPhone taloha amin'ny finday finday Android vaovao misy olana dia aza manahy intsony. Amin'izay mba ny fanombohana amin'ny Android-nao dia aza manomboka diso tongotra Nisafidy rindranasa iray izahay fa aorian'ny fampiasana azy dia tsy hisalasala hanome sosokevitra ianao. Tao anatin'ny iray minitra latsaka dia ho hitanao ny fomba fifandraisan'ny mpifandraisanao amin'ny fitaovana iray hafa nefa tsy mila manasarotra zavatra ianao.
Na avy amin'ny iOS ianao na raha manavao fitaovana iray ary te-hamerina ny boky fifandraisana ity no fampiharana mety indrindra. Ny kinova nohavaozina vao haingana sy ny naoty 4,8 ao amin'ny Play Store mialoha azy. Y ny fanandramana nampiasa azy imbetsaka dia manamafy ny fahombiazany tena tsara.
Tsy maintsy misintona ny App amin'ny iPhone ary koa amin'ny fitaovana vaovao. Mahazo miditra amin'ny alàlan'ny sary masina aminy isika amin'ny telefaona roa miaraka. Raisina an-tsaina fa tsy maintsy ataontsika miasa Bluetooth. Ao amin'ny telefaona vaovao dia hofidintsika ny safidy «manafatra fifandraisana amin'ny fitaovana hafa». Ny fampiharana dia hanara-maso ireo fitaovana Bluetooth akaiky. Rehefa mahita ny anaran'ny fitaovana taloha eo amin'ny efijery isika dia mila mifidy azy fotsiny amin'ny fipihana eo amin'ny kisary miseho miaraka amin'ny anarany.
Hisafidy isika, raha izany dia, ny iPhone izay tiantsika hanafarana ny fifandraisana. ilaina manome alalana ny fampiharana ilaina mba hahafahanao miditra amin'ny data ao anaty kalandrie. Vantany vao manao an'ity isika, hanomboka handika avy amin'ilay fitaovana taloha ho an'ilay vaovao ilay phonebook. Mijanona fotsiny ny fanomezana alalana amin'ny fitaovana vaovao hahitana ireo angon-drakitra nafarana ao amin'ny boky fifandraisana. Y Avy hatrany dia afaka mankafy ny fifandraisantsika rehetra amin'ny telefaona vaovao isika. Mora izany.
Ankehitriny, tsy afaka mampiasa fialan-tsiny intsony izahay fa tsy manova ny rafitra fiasa noho ny fahasarotana amin'ny famindrana ny angoninay avy amin'ny sehatra iray mankany amin'ny iray hafa. Noho ireo rindranasa ireo dia afaka manana ny fisie sy sary ary ny fifandraisana rehetra izahay amin'ny alàlan'ny dingana tena tsotra.
Vonona handentika ny tenanao amin'ny tontolon'ny Android ianao izao
Hoy Nohazavainay tamin'ny antsipiriany ny fomba hidirana tanteraka amin'ny tontolo iainana ekosistra Google. Manomboka amin'ity fotoana ity dia efa tafiditra ao amin'ny fiainanao ny Android. Voalamina tsara, Smartphone dia lasa "fanitarana" mahasoa ny tenantsika. Ary lavitra ny sakana amin'ny fifandraisantsika manokana, amin'ny fampiasana araka ny tokony ho izy, dia afaka manampy antsika amin'ny fomba maro izany.
Raha nisalasala ianao hatramin'ny voalohany nanapa-kevitra amin'ny iOS na Android lazao aminao fa rehefa mandeha ny fotoana, ary mihabetsaka ny rafitra fiasa roa samy hafa. Amin'ny fitsipika dia azontsika atao ny milaza fa mitovy tanteraka ireo roa ireo, ary miasa miaraka amina foto-kevitra iray ihany izy ireo. Ary izy roa dia tohanan'ny fivarotana fampiharana izay mamita ireo serivisy fototra atolotray.
Ny fahaizan'ny Android miavaka amin'ny ambiny dia noho ny toe-javatra lehibe sasany. Rafitra miasa miaraka amin'ny malala-tsaina kokoa amin'ny lafiny rehetra. Ny rindrambaiko maimaimpoana dia iray amin'ireo fananany lehibe indrindra. Fahazoana mivelatra amin'ny fampiharana raha tsy mila fahazoan-dàlana lafo vidy. Ary ny fahafaha-manana fivoarana bebe kokoa sy mety ho fanaingoana. Raha ny tokony ho izy dia tsy hisy zavatra tsy hainao amin'ny Android amin'ny rafitra fiasa hafa.
Raha tsy vao manomboka ianao dia mety ho hitanao fa ambany loatra io toro-lalana io. Na dia io aza no tena fiafaran'ny famoronana. Ampio ireo izay, noho ny toe-java-misy, dia tsy afaka na te hahalala teknolojia finday vaovao hatreto. Nahasoa anao ve ny tari-dalanay? Manantena izahay fa nanampy anao hanao ny finday avo lenta vaovao araka izay azo atao. Ankehitriny ianao dia mila mankafy ny traikefa Android amin'ny fahafenoana, mirary soa!
Ary raha manana fisalasalana ianao na misy zavatra tsy hainao atao, avelao ny hevitrao fa hanampy anao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Boky torolàlana Android, torolàlana fototra ho an'ny vao manomboka
Amin'ireo Boky Torolàlana feno hatreto! Tena soso-kevitra!
Xabin dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara. Matetika no heverina ho zava-dehibe fa mazava ny olona rehetra momba ny foto-kevitra fototra sasany
Mamaly an'i Xabin
Nagore dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara !! Tokony ampidiriny ao anaty fonosana izany rehefa mividy telefaona vaovao ianao mba hifehezana ny zava-drehetra.
Mamaly an'i Nagore
Fandraisana anjara tsara. Misaotra betsaka
Io no boky pseudo manual feno sy mazava, fohy ary azo ampiharina izay hitako hatramin'izao.
Mifanohitra amin'ny tsy fisian'ny boky torolàlana mahamenatra (soloina brochure kely tsotra) amin'ny ankamaroan'ny telefaona finday vaovao indrindra. Tokony rarana sy hosazina izy io.
Etsy an-danin'izany, ho ohatra ny TSY FAMPIANARANA ireo boky fampianarana ao amin'ny terminal ANDROID:
Ahoana no HANASANA ny nomeraoko rehefa miantso amin'ny XIAMI MI A2 sy A1 amin'ny Android 8.1 aho?
Mangetaheta aho satria TSY AZO jerena amin'ny fikirakirana na ao amin'ny boky torolàlana TSY MISY MISY ary TSY ny hadisoan'ny mpandraharaha, izay efa nantsoiko.
Misaotra mialoha amin'ny fanampiana ahy
Ireto ny tolotra Amazon amin'ny finday finday ho an'ny androany
Telefaona 10 ambony amin'ny 2017